Geoinformatics 1: Qalabka fog - Joogo
Geoinformatics 1: Dareenka fog
Febraayo, 2010 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, topografia
Geoinformatics waxay soo gaartaa daabacaaddeeda koowaad ee 2010, iyada oo calaamad u ah feejignaanta fogaanta. Inkastoo sanadku yahay da 'yar, waxay u muuqataa in daabacaadyada soo socdaa ay sii hayn doonaan khadkan, marka lagu daro waqtigan laba ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee qaybta aan xor ahayn: ERDAS iyo ENVI.
Haddii ay arrimuhu yihiin sida aan u malaynayo, qaybaha soo socda waxay sameyn doonaan dib u eegista qalabka, mawduucyada dareemayaasha meelaha fog, mawduuc taas oo qaybta xor ah ay horumarin badan tahay. Waxaa suurtagal ah in ay tixgeliyaan buugaagta SEXTANTE iyada oo la raacayo habka isdhexgalka ee qalabka isticmaalka bilaashka ah (gvSIG, uDig, Grass, iwm.)
Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso, halkan waa talooyin:
Marka qalabka fog ee fog iyo SIG ku yaalaan.
Waa wareysi xiiso leh Rolf Schaeppi, madaxweyne ku xigeenka hawlaha Yurub ee ITT. Wareysiga waxaa sameeya Eric Van Rees, isaga oo markii hore weydiistay dib u eegis kooban oo taariikheed oo ku saabsan ENVI, laakiin sida horumarka su'aalaha, mawduucyada sida:
Isdhexgalka ENVI EX oo leh ArcGIS, taas oo fududeynaysa isdhexgalka ka dhexeeya labadaba, awood u leh in ay ka faa'iidaystaan ​​khibradaha gaarka ah iyo iyada oo aan lumin waxyaabaha sida jidka, sida calaamadaha iyo calaamadaha.
Kadibna wuxuu xirxiray aragtidiisa udhexeeya GIS iyo Qalabka fog, mawduucyada ayaa waxooga koobay wax yar, maaddaama muuqaaladu gaadheen qaraar sare.
ERDAS, maxaad tahay bartilmaameedka 2010?
Waraysiga Mladen Stojic, Suuq-geynta Ganacsiga Erdas wuxuu ku saleysan yahay isbeddelada loo maleynayo ganacsiga in sheygani uu awood u leeyahay inuu si fiican u guto.
Mowduucyada, waxay ka hadlaysaa 5D shuruudaha nidaamyada lagu qeexayo, oo ay ka mid yihiin: X, Y, Z, badanaa la aqbalo, ku daray waqtiga iyo macluumaadka la xiriira. Kadibna waxuu sameeyaa waxyaabo kale oo fara badan, ka dibna wuxuu la socdaa wareegga maareynta xogta Earth Digital.
Wareysigu wuxuu noqonayaa mid xoogaa culus, sababtoo ah qaar ka mid ah su'aalaha waa kuwo ballaadhan, laakiin ma aha wax aad u badan in laga faa'iideysto waxa ay ka fekerayaan heerarka iyo habka daruuradooda.
Jack Dangermond waxay si joogto ah u siisaa wareysiga mid ka mid ah ardaydiisa tiradii hore, waxay ka hadlaan Geodiseño iyo baahida aan u aragno marxaladda kala duwan mar kasta oo aan samaynayno wax. Aad ugu wanaagsan jidka, mawduucda 2011 ayaa na soo dhaweyn doonta, maxaa yeelay fikradda BIM waxaa loo tixgeliyaa maalin kasta iyada oo mudnaanta sare leh, iyo in curyaamiyaha nalalkan uu kor u qaado iyada oo arrintani muhiim u tahay qof kasta.
Wali waa la arkaa haddii ay tixraacayaan waxa guud ee uu leeyahay, ama fikradooda ku saabsan heerarka ku salaysan "samee sida ESRI", Laakiin ma sheegayo sida ay u shaqeyso.
Waxaa jira maqaal aad u qoto dheer oo ku saabsan nidaamyada mashiinka moobiillada, dhowaan la furfuri karo, dhacdooyinka qaar ayaa ku jira, sida FIG-2010 International Congress of Surveyors, iyo Leica HDS oo dhacday. Cinwaanka: farxad, halkan waa tijaabo.
ESRI Grass GvSIG OS majallado
Post Previous«Previous Khariidadaha Google waxay hagaajinayaan hawlgalka
Post Next Isla mar ahaantaana isla waqtigaas ...Next »
Hal Jawaab u Jawaab "Geoinformatics 1: Qalabka fog"
Mid ka mid ah isagu wuxuu leeyahay:
Waxay ahayd waqtigii, saaxiib, in la sheego, haddii aad rabto, ereyga Qalabka fog ... 🙂